Yenziwa njani indima? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yenziwa njani indima?
URuben mendez | | Ezahlukeneyo
Ukwazi lenziwa njani iphephaKuya kufuneka uyazi ukuba kuphi, njani kwaye ngubani owayiqulunqa kwaye yayizeziphi iinguqulelo kule minyaka idlulileyo. Wonke umyili olungileyo kufuneka azi yenziwe ngantoni indlela ekuza kubonakala ngayo umsebenzi wabo.
Ukungeniswa eChina nguHan Hsin ekuqaleni kwekhulu lesi-XNUMX BC. Umbono wokuqala yayikukuyila isinxibo esingabizi kakhulu. UTs'ai Lum ukhumbula ukuyilwa kwe U-Han Hsin Kwaye wafumanisa ukuba ulahlekile kuphela yinto yokubopha imicu yomsonto kunye nokuyivimba ukuba ingangeni manzi (oku kuphunyezwe ngokubilisa i-algae ebizwa I-Agar Agar kunye nokusebenzisa i-gelatin. Inkqubo ye- Uxwebhu oludala eSpain Ingaba u "IMozarabic Missal » yomhla we-1040-1050, igcinwe kwi-Monastery yaseSilos.
1 Ukuguquka kwemvelo
1.1 Izinto zephepha
1.2.1 Iintsinga zomthi
1.2.2 Imithi enqabileyo okanye enegqabi
1.2.3 Iintsinga ezingezizo iinkuni
1.2.4 Iintsinga zokwenziwa
1.2.5 Izinto ezingekho kwimicu
1.3 Ukwenziwa kweekhemikhali ngomthi
1.3.1 Ezinye iimveliso:
1.4 Ukulungiswa kweenkuni
1.4.2 Ukugcina iinkuni
1.4.4 Unama oomatshini
1.4.5 Ukujija okanye ukucokisa umgubo woomatshini:
1.4.6 Unama weThermomechanical
1.4.7 Unamathisele imichiza-ithemomechanical
1.4.8 Unamathisele amachiza
1.5 Inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
1.6.1 Ukuphuma kwebala eliqhelekileyo
1.6.2 IChlorine Dioxide Bleaching
1.6.3 Ucoceko lweOzone
1.6.4 I-enzyme Bleaching
1.6.5 Ucoceko lwaManzi oluManzi
1.7 Iifayibha zihlelwa
1.7.1 Iintsinga zaseprayimari
1.7.2 Imicu yesibini
1.8 Inkqubo yokuncipha
1.8.1 Umiselwe ngokuhlamba
1.8.2 Ukuhamba kwe-inki
1.8.3 Iinkqubo ezidibeneyo
1.8.4 Imiselwe zii enzymes
1.9 Ukwenziwa kwephepha
1.9.1 Ukuxuba ibhafu
1.9.3 Iindidi ezi-2
1.9.4 Ibhokisi yentloko okanye intloko yomatshini
1.9.6 Itafile ethe tyaba
1.9.8 Izixhobo zokuntywila emanzini
1.9.10 Iibhokisi ezinomdla
1.9.11 Isilinda sokufunxa
1.9.12 Umbulali we-foam okanye i-roller dandy
1.9.13 Oomatshini bokushicilela
1.9.14 Ukuba uyafuna
1.10 Unyango oluphezulu
1.10.1 Cinezela ubungakanani
1.10.7 Umxube wezinto
1450 UGutenberg ungenisa iCandelo lokuPrinta.
1670 kunye ne1680 Imfumba yamaDatshi yaqanjwa, ekrazula iimpahla ezindala kunye nokucaciswa kwayo nganye nganye.
1789 ULuis Nicolás Robert -Ungenise umatshini onokwenza amaphepha amade ngephepha eliqhubekayo.
1807 Ukusetyenziswa kwekaolin njengokugcwalisa kubonakala.
1874 Yazisa ngenkqubo ye-bisulfite.
1884 Inkqubo yeSulphate okanye yeKrafft iyavela.
Izinto ezingafunekiyo zokwenza iphepha zezi:
Iifiller kunye nee-pigments
Iintsinga ezingezizo iinkuni
Imithi engapheliyo okanye eQinisekayo
Iphayini kuzo zonke iintlobo zayo kunye nefir
Ubungakanani obuqhelekileyo phakathi kwe-2 kunye ne-4 mm, nangaphezulu
Ukuxhathisa okuphezulu kwamaphepha egrama esezantsi
Imithi enqabileyo okanye enegqabi
I-Eucalyptus, Beech kunye neBirch
1mm ubude obuphakathi
Iintsinga zayo zibonelela ngokugudileyo kunye nokwenziwa kwephepha elilungileyo
Ipesenti yayo ephepheni inyuka njengoko igrama inyuka, ikwazi ukufikelela kwi-100% kumaphepha angaphezu kwe-150 gr / m2.
Banokuba yingxowa yeswekile kunye ne-cereal straws, i-hemp, i-esparto, umqhaphu kunye neflakisi.
Inentlaka————————- 4 mm
Amagqabi ————————- 1,5 mm
IBagasse ——————————- 1,7 mm
Ingqolowa nerhasi —————— 1,5 mm
I-Esparto ————————— 1,1 mm
Ngeendiza kunye Rice———————-- 0,5 mm
Umqhaphu ————————––30 mm
Ukuveliswa kwemveliso yemizobo
Amandla aphakamileyo aphela i-polyethylene
Izinto ezingekho kwimicu
Imveliso engaqhelekanga ethi ngamanye amaxesha ibe yinxalenye yephepha izixa ezikhulu.
Iziphumo zeMirhumo kunye neMibala
Ubumhlophe kunye ne-opacity (Refractive Index)
Ubuninzi bayo - imithwalo engaphezulu, kokukhona igrama
Ukufunxa uLwelo -Uthintela ukuhanjiswa kweinki
Imilo yeJometri- Yenza ubukho bunciphise ukusebenza kwayo.
Ukwenziwa kweekhemikhali ngomthi
IHolocellulose: Iselulosi + ihemicellulose
Lignin: Yinkomfa yemichiza entsonkothileyo kakhulu, kuba yeyona nto ibambe imicu leyo ngokuqinileyo.
Mhlophe: Yimbonakalo ebonakalayo yokukhanya.
UKUQALA I-25 -30% 18 -30%
ICELULOSE 40 - 45% 45 - 50%
IMVUMELWANO 10 -15% 20 - 30%
Intlabathi 4% 1,5 - 2%
Sebenzisa izixhobo kunye namandla
Eyona ndawo iphakathi- Igubu likaDebarker
Phakathi kwama-25 nama-55% Ukufuma
Phakathi kwama-25 nama-35º amaqondo obushushu
I-Resinous - engekho ngaphezu konyaka omnye
Amagqabi - Phakathi kweenyanga ezi-2 ukuya kwezi-6 ukunqanda ukulahleka komgangatho
Emva kokumakishwa kweengodo kuncitshiswa kwaba ziichips okanye IINKCUKACHA ukubanakho ukwenza i-pastes ezithile, ezinje ngeekhemikhali, isemichemical kunye nokucocwa koomatshini. Ubungakanani be-chip buya kuhambelana nokufakwa kwe-reagents ezisetyenziselwa ukudubula.
Ipasta yoomatshini bokulinganisa
Ukusuka kwizikhuni ezingasetyenziswanga
Ivili lokugaya, indawo egudileyo, ihlala ifumile.
Coca ivili lokusila
Iyaqhubeka: UWarren de Cadena
Dashed: Mntla Omkhulu
Ukusebenza okuphezulu (95%)
Iimpawu ezilungileyo zezandla (
Kunzima ukuba mhlophe
Ubumhlophe obuphantsi <80%
Ukonakalisa udonga lwefayibha
Ukujija okanye ukucokisa umgubo woomatshini:
I-Disc shredders, umgangatho ophezulu wempuphu
Iimpawu ezingcono zomzimba
Ithuba lokusebenzisa iinkuni ezilahliweyo
Ithuba lokusebenzisa umthi onzima
Unamathela kumgangatho ofanayo
Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu
Iindleko zolondolozo oluphezulu
Iimpawu zoomatshini bencam ye-chip ziphuculwe
Ukulungiselela le nto, umphunga waziswa kubushushu obuphezulu ukufudumeza iichips ngaphambi kokuba ubazise kwidiski yokucoca, ebangela ukuthamba lignin kunye nokunciphisa amandla emicu.
Utyekelo lokuguga kwaye ujike ube tyheli
Ukukhanya okuphezulu. zilungele iphepha elilula.
Iimeko ezingcono zomzimba kunezinto eziqhelekileyo ezenziwe ngoomatshini
Iichips zinciphise ubungakanani, emva koko kwisigaye apho kukho isoda kwi-Tº yama-60 ukuya kuma-80º iiyure ezintathu. (Kwimeko yokuncamathisela kweekhemikhali, ipheka ixesha elide kwaye kubushushu obuphezulu).
Inqanaba lokususwa kwe-lignin liya kuba lukhulu ngakumbi kunyango lokudubula kweenkuni.
Yenziwe eSweden ngo-1874
Ukupheka utywala yi-bisulfite ene-calcium, i-magnesium okanye i-ammonium base.
Ukupheka ubushushu phakathi kwe-130º kunye ne-140º
Ukupheka ixesha phakathi kweeyure ezi-6 ukuya kwezi-8
Ukulungiswa kwezinto kulula kwaye kuvelisa iipasta ezityebileyo kwiihemicelluloses, ezifanelekileyo kumaphepha afana neglasi.
Isivuno esiphakathi kwama-45 nama-55%
Impembelelo enkulu yokubandakanywa kwibhoyila yokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo
Utywala obumnyama obenziwe ngezinto eziphilayo, izimbiwa kunye namanzi kuxinzelelo lwe-18 ukuya kwi-20%, ngumophuthisi uxinzelelo luphakanyiswa laya kwi-60%. Emva koko itshiswa ivelisa ubushushu. Uthuthu lwenziwe ngesodiyam carbonate. Emva koko, isoda iyafunyanwa kwakhona. Vavanya ama-45 ukuya kuma-55%.
Injongo ye-bleaching kukususa i-lignin engakhange isuswe ngokupheka.
Ukuphuma kwebala eliqhelekileyo
Phakathi kwesigaba ngasinye kukho isigaba sokuhlamba.
IChlorine Dioxide Bleaching
Ukupheliswa kweoksijini yi-oksijini, emva koko kuphekwe kwaye emva koko kufakwa unyango nge-chlorine dioxide.
Ubumhlophe obungaphezulu kwama-90%
Iziphumo ezingamkelekanga malunga nelahleko lokuxhathisa
Ii-enzyme kunye nezinye iiblitshi
Ubumhlophe obuphezulu kakhulu
Ukuncitshiswa kweChlorine dioxide nge-10-15%
Ucoceko lwaManzi oluManzi
I-hydrogen peroxide, esetyenziswa kwi-pastes yemichiza-ye-thermomechanical
Umdibaniso weFektri-Iya kuthunyelwa ngemibhobho.
Ayidityaniswanga-Kwibhokisi, amaphepha e-pasta anomswakama we-10% ayenziwa ukulungiselela ukuthuthwa kwazo.
Amanzi amaninzi, ixesha elincinci lokungunda okunokwenzeka.
Zifumaneka emithini okanye ezinye iintlobo zezityalo zemifuno, ziifayibha zokusetyenziswa okokuqala. Iziqwenga ezivela kumatshini okusila amaphepha avela kwinkunkuma zijongwa njengeentsinga eziphambili.
Sisikhongozeli esine-helix kwicandelo laso elisezantsi elishukumisa amaphepha e-pasta kwaye ikhethe imicu nganye, ilungiselela ukumiswa okumanzi phakathi kwe-6% kunye ne-12% yento eyomileyo emanzini.
Isixhobo sikhutshiwe ngokudlulisa umxube kwisangqa esingavumeli ukudlula kwamaqhekeza amakhulu.
Amanzi asetyenzisiweyo kwipulper amhlophe, aphinda asebenze kwakhona kumzi-mveliso ngokwawo (amhlophe ngenxa yomxholo weentsinga kunye nokuzaliswa).
Ifayibha ende kunye nefutshane ibekwe yodwa kwi-pulper. Abayi kuxuba kude kube emva kokucokiswa.
Zisetyenziselwa ukusombulula ingxaki yamasuntswana ahlekileyo avela kumgubo. I-de-chipper yenziwe ngeediski ezimbini ezifakwe iitoni okanye uqikelelo.
Ngokucokisa kunikwa iimpawu zokuvelisa ezona ntlobo zahlukeneyo kunye neentlobo zamaphepha. Iphepha ngalinye lifuna ukucokiswa okufanelekileyo, ezi zezinye zeentlobo:
Ukuphuculwa kweAngle encinci
Ukucokisa okubanzi kweAngle
Nokuba yeyiphi na into yokusulungekisa, umsebenzi osisiseko wenziwa phakathi kwento esisigxina kunye nenye ejikelezayo, kugqitywa uncamathiselo phakathi kwabo.
Emva kokucokiswa, imicu iphantsi kwesenzo esinamandla okanye esingaphantsi esivelisa isiphumo:
Shake kwaye Shake:
Ifayibha ifakwe emanzini
Hlikihla. Iifayibha zityibilika zibe yimicu
I-Shear- I-fiber ifumana ukunciphisa ubude okanye ukusika.
I-Fibrillation kukukhutshwa kweentsinga kunye nemveliso ecolekileyo ekhokelela kukonyuka okubonakalayo kwindawo ethile yomphezulu, ukuphucula ubude beenyembezi kunye nokugqabhuka kwephepha.
Ifibrillation ephezulu + Ukungazinzi okuphezulu
Umsebenzi wokucoca ulawulwa kwinqanaba lomatshini ngesixhobo esilinganisela umthamo wokuhambisa amanzi okanye isantya esimalunga nokuncamathisela okuvumela amanzi ukuba aphume. Ilinganiswa kumabakala e-Shopper-Riegler (SRº), ixabiso liphezulu, kokukhona ukucokiswa kukhulu.
Ukucokiswa okuphezulu = Amanzi amancinci
Ukucokiswa okuncinci = Amanzi amaninzi
Nje ukuba icocwe, ipasta igcinwe kwiivenkile ezinkulu kunye nokuphazamiseka.
Iifayibha esele zenziwe ubuncinci kwinkqubo yokuvelisa enye zifumana eli gama.
Baziwa ngegama lika IPHEPHA, Banokudityaniswa nezokuqala okanye banokuba yi-100% yesibini.
Amaziko okuqokelela ahlala ezixekweni ezikhulu kwaye uhambo olude luye kwiifektri lunokubenza bangabi noqoqosho.
Kuyenzeka ukuba uphinde ubuye ngaphezulu kwe-50%
Ayizukusebenza njengesihluli sephepha kuphela kodwa iya kusebenza njengokukhuhla ukushenxisa ukungcola okunje ngeentambo neengcingo.
Inkqubo inokugqitywa nge-splinter
Yenziwe ngeemveliso zamachiza ezinxibelelana ngokufanelekileyo nobushushu kunye nokusetyenziswa kwamandla oomatshini ukususa i-inki ephepheni.
Izicoci: susa inki
Abasasazi: Ukuze i-inki ishiye amanzi kwaye ingafaki ukufaka imali kwakhona.
Iiarhente ezinegwebu: Ukuququzelela ukususwa kwe-inki.
Isebenza kakuhle isusa amasuntswana obukhulu be-1 ukuya kwi-10
Yeyona isetyenziswa kakhulu
Injongo yeekhemikhali ezongeziweyo kugwebu kunye nokunyibilikisa i-inki.
Isebenza ngakumbi kunokuhlamba njengoko isusa ii-inki ezinkulu kunye nelahleko yefayibha incinci.
Udinga amanzi amancinci kwinkqubo
Ukuhlamba kusebenza ukususa iincinci ezincinci kunye nemithwalo yamaphepha kunye nokuphucula inkqubo elandelayo.
Imiselwe zii enzymes
Umkhwa omtsha kwinkqubo yokwahluka. Enye yeengxaki inokuba sisizukulwana esiphakamileyo segwebu.
Kukho ukulahleka kwemicu kunye nokumelana
Azinakuphinda zenziwe ntsha kwakhona unaphakade, zivumela kuphela ukusetyenziswa kwe-3 ukuya kwe-5.
Ukusukela ngalo mzuzu kuqhubeke, ukuvelisa kuyafana ngokuchanekileyo kulo naluphi na uhlobo lwephepha. Umahluko uya kunikwa ngokwenziwa kwayo kunye nokugqitywa.
Uqeqesho lwephepha: Guqula ukuhamba kokuncamathisela kwiphepha elibanzi nelifanayo.
Apho izinto ezahlukeneyo zongezwa ngokwephepha elinje:
Amasuntswana angafunekiyo ayasuswa.
Zisusa amasuntswana anobunzima ngokusekwe kwimeko yokuba baya kudlula kwiscreen se-perforated okanye umnatha.
Basebenzisa amandla e-centrifugal yokujikeleza kwepasta ngaphakathi kwimizimba ye-conical eyahlula amasuntswana anzima, aphuma ngakwicala elingaphantsi elivulekileyo.
Iinkqubo ezi-2 zihlala zidityaniswa ukuze zisebenze ngokukuko.
Ibhokisi yentloko okanye intloko yomatshini
Izinto ezisisiseko zokwenza amashiti abanzi kwaye acekeceke
Bafuna ukuhamba rhoqo kunye nokufanayo kokungena kwepasta.
Isixhobo esenza uxinzelelo kunye nokuhamba kokuncamathisela kuhlala kububanzi bebhokisi engenayo.
Igumbi lokuLandisa: Inceda ulungelelwaniso olungcono lweefayibha ekumisweni.
Isixa sokumiswa okanye isincamathelisi esingxubileyo ekufuneka sifikile kwilaphu kufuneka sibe yimfuneko:
Ukulandelela isantya semveliso
Fumana iprofayili efanayo
Itafile ethe tyaba
7 okanye 8 yeemitha ububanzi
Inceda ukususa amanzi ngokuhambisa amanzi
Ilaphu linentshukumo enqamlezileyo ebizwa ngokuba tracheo, ukuze uqhelanise nemicu kunye nokuphepha ukubola.
Imveliso yoMatshini: Isikhokelo seFayibha
Umgaqo ojikelezayo: Ngokuchasene nefayibha
Oomatshini abadala: isantya esiphakathi kwe-30 ukuya kuma-40 m / min
Leyo ye-4 okanye ye-5 kwiminyaka eyadlulayo: isantya esiphakathi kwe-800 - 900 m / min
Okwangoku: Isantya esiphakathi kwe-1300 - 1400 m / min (ezi azinamkhondo)
2 Iintlobo zeetheyibhile
Icala leMpahla Ngakumbi krwada
Ubuso beFel: Ubuso obuphezulu. Ukuthambisa ngaphezulu kwepesenti yemithwalo
Ilaphu eliphindwe kabini:
Ivumela ukwalathisa ukuhambisa amanzi ngaphezulu kwiibhokisi zokutsala, ukufumana amanye amashiti alinganayo. Isantya esivela kwi-1400 ukuya kwi-1500 m / min
Kuya kufuneka ivumele ulwabiwo olulungileyo lokuncamathisela
Khusela ukuhamba kwemicu
Thintela imicu ekuncamatheni kuyo
Iiplastiki: + Ixabiso + lomelele
Ukuntywila emanzini: kukupheliswa kwamanzi
Izixhobo zokuntywila emanzini
Bayalixhasa ilaphu kwaye basusa amanzi. Ayisetyenziswanga xa umatshini ungaphezulu kwe-300 m / min
Zizinto ezakhiwe ngemivalo engajikelezi kwaye nelaphu liyatyibilika kubo.
Zihlala ixesha elide kwaye zinenkqubela phambili.
Yeyona nto ixhaphakileyo kwindawo yokuqala yokuhambisa amanzi.
Isenzo esinamandla ngakumbi
Inani leebhokisi lixhomekeke kubude bomatshini
Isebenza ngeempompo ezincamathelayo.
Indawo yokugqibela yokuhambisa amanzi etafileni
Ukuqhagamshelana kwendwangu kugobile kwaye akukho ndawo incinci
Inebhatyi yesinyithi ebunjiweyo ejikelezayo ngesantya selaphu
Umbulali we-foam okanye i-roller dandy
Iqhutywa kuphela ziitafile eziqhelekileyo
Inceda ukufezekisa ibreyidi egudileyo kunye neyunifomu
I-Headbox —————- 99% Amanzi ————————- 1% Umcimbi oMnandi
Ilaphu lokugqibela ——————- 80% aManzi ——————– 20% Umcimbi oMnandi
Ukucofa okumanzi kwiphepha lephepha kwenziwa ngokudibana nokuziva
Kuza kusuka kwi-80% ukuya kwi-60% yokufuma
Isusa intsalela yamanzi ngobushushu
Amacandelo amabini: 1 eyomileyo neyesibini eyomileyo
Phakathi kwabo kubekwa inkqubo yokunika unyango kumphezulu wephepha
Amaqondo obushushu enyuka ngokuthe ngcembe ukusuka ku-70º ukuya ku-120 - 130º
Iintsinga ziyancipha ngokulandelelana kwama-20% ububanzi kunye ne-1% -2% ubude. Oku kudala ukungavisisani ngaphakathi.
Ekupheleni kokulandelelana kwe-2 izileyi ziyahlaziya
Ukucofa ubungakanani (uninzi lwangoku)
Inokubandakanya ukufaka umaleko omncinci wokubopha.
Ukuba ibinder kuphela = Iphepha lokuLungisa
Ukuba ibinder + pigment = Iphepha elinemibala
Iphepha lokulinganisa = 1 - 2 gr / m2
Iphepha elinemibala = 4 - 5 gr / m2
Ngamanye amaxesha ubungakanani-bokushicilela bufakwa ngaphambili
Isosi ifuduselwa kwizitena zokufaka ngokusebenzisa iroli ephakathi
Ikuvumela ukuba ufake isixa esikhulu somaleko
Amaxesha amaninzi isetyenziselwa amaphepha camera
Uluhlu lokukhanya lwe-8 - 10 gr / m2 ngobuso
Inkqubo esetyenziselwa ukutyabeka umatshini
Isicelo senziwe kwicala elinye ngensimbi kwaye kwelinye ngerola.
Umatshini owenziwe ngeeroli zentsimbi (ukusuka kwi-2 ukuya kwi-5)
Umsebenzi wawo kukuhambisa iphepha kwaye ulawule ubukhulu kububanzi bephepha.
Bahlala behamba emva kokupholisa izileyi
Iziphumo zalo zixhomekeke koxinzelelo kunye nenani lokupasa iphepha ngokusebenzisa imigca yokunxibelelana okanye IINKONZO.
Nje ukuba iphepha lidlule kwiindawo ezigudileyo, lisongelwe kumatshini obizwa ngokuba ngupopu, emva koko linokulandela iindlela ezimbini
Iphepha Elingadityaniswanga okanye Elisongelwe Ngomatshini ———-> Ligqityiwe
Ukuba liphepha eliphume kumatshini, liya kumatshini wokutyabeka
Amanzi athunyelwa entlokweni yekhozi ayavavanywa ukuze kupheliswe ukungcola.
Ngumatshini osebenzisa isosi yestucco kwinkxaso
Ifakwa kusetyenziswa iroli kwaye iyalinganiswa kwaye idosiwe kusetyenziswa iphepha lesinyithi
Iindidi ezi-2 zeebhleyidi: ziqinile (90º bevel) okanye Flexible (45º kakhulu)
Ingqongqo inika phakathi kwe-12 - 13 gr / m2 isupco isosi
Flexible inika phakathi kwe-22 ukuya kwi-23 gr / m2 isupco isosi
Banokusebenza ngesantya esiphakathi kwe-600 ukuya kwi-700 m / min. nangona ngoku kukho oomatshini abasebenza kwi-1200 m / min.
Ukuthamba kwephepha kuya kuba ngaphantsi kokulunga kwephepha.
Ulwelo olugqithisileyo lufakwa ngeroli ethi isuswe ngumoya oxinzelelweyo
Phakathi kwama-20 ukuya kuma-40 gr / m2
Akukho ngaphezulu kwe-350 m / min
Isosi ye-viscosity esezantsi
Ukugqibelela okungaphantsi kunokususa
Ukulungiselela izinto zokwaleka,
Umququzeli wokusasaza kunye nokwenza homogenize izinto zenhlama
Amacebo okucoca ulusu ukulungisa ingxaki
Iimpompo zokudlulisa i-stucco
Imichiza yokubulala iintsholongwane
Eyaziwa ngokuba yiCast Coated
Amalungelo awodwa omenzi wechiza:
Isicelo seStucco ngomlomo ovuthuzayo
Kuthetha ukuba nenkxaso egudileyo
Faka istucco ——> Ngaphambi kokuba wome (infrared) ——-> 180 ° isilinda chrome
Imisiwe njengoko iphuma yomile kakhulu kwisilinda ye-chrome
Isicelo seStucco——–> 80 ° isilinda chrome
Olu hlobo lwe-stucco kuzo zombini iimeko lwenziwa kwicala elinye kuphela. Ukuba ufuna zombini, zenziwa ngokungafaniyo ezimbini ngobuso obunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yenziwa njani indima?
UJose Luis Moncayo sitsho
Ukufundwa kwephepha le-fiber kuya kuba kukuncedisa
Phendula ujose luis moncayo
Izixhobo zomoya oshushu (uburhabaxa, iivenkile, iibrashi, imifanekiso)
Imithetho emi-5 yegolide yokwenza iifonti ezimangalisayo